Siyaasiyiinta Jubaland oo ku celiyay taageerada ay u hayaan DFS iyo Dastuurka – SBC
Siyaasiyiinta Jubaland oo ku celiyay taageerada ay u hayaan DFS iyo Dastuurka
Posted by Webmaster on May 22, 2013 Comments
Maamulka Cusub ee Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee Jubaland ayaa Mar kale ku celiyay in ay taageero buuxda u hayaan Dowlada Federaalka ah ee uu horkacayo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayna ku dhaqmeyso Dastuurka dowlada federaalka ee saxda ah.
“Dowlada Federaalku waa dowladayadii, waan taageersannahay, Madaxweynuhu waa madaxweynaheenii, Dastuurkii saxda ahaa ayaan ku dhaqmeynaa, waxkasta oo aanu ku wada hadleynana diyaar ayaan u nahay” sidaasi waxaa yiri Hilowle Aadan Maxamed oo ah xubin ka tirsan Maamulka Jubaland ahna siyaasiyiinta sida weyn u taabacsan Madaxweynaha Jubaland.
Mar uu ka hadlayay Gudiga Dowlada federaalka u soo dirtay ee ku sugan Magaalada Kismaayo ayuu sheegay Hilowle in ay soo dhaweynayaan hadii ay ula yimaadaan waxyaabaha sharciga ah ee ay ku wada hadli karaan.
Waxa uu taabtay in hadii ay ugu yimaadaan wafdigaasi Jaamacada Kismaayo soona hordhigaan shaqadooda rasmiga ah ee ay kismaayo u joogaan, iyo doonitaankooda wada hadal lagu qanco ay diyaar ula yihiin wax kasta oo la isku afgaran karo, ayna tahay rajadooda in ay hirgasho maamulka mideysan ee ay sameysteen Shacabka reer Jubaland.
Sikasatab ha ahaatee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose waxaa kusugan wafdi balaaran oo heer xildhibaano iyo xubno kale isugu jira kuwaas oo maalmo ka hor gaaray halkas, waxaana u soo xilsaaray arinta Kismaayo Raiisul wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mr Saacid.